Maxay yihiin Qodobada ugu adag fulinta Heshiiska doorashadda? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxay yihiin Qodobada ugu adag fulinta Heshiiska doorashadda?
Arinta Gedo iyo dhismaha Gudiyadda doorashooyinka Heer Federaal iyo Heer Maamul Goboleed ayaa ah qodobada ugu culus ee heshiiska doorashadda ee la saxiixay May 27.
MUQDISHO, Soomaaliya - Heshiiskii doorashadda ee lagu saxiixay 27-kii bishan waxaa ku jiro qodobo culus oo u baahan waqti badan iyo la-tashiyo dheeraad ah, si hanaanka doorashadda cusub uusan u fashilmin.
Qodobada horyaalla RW Rooble waxaa ugu waaweyn qaab-dhismeedka Gudiyadda doorashadda iyo doorashadda Gedo, oo ahaa xudunta khilaafkii hareeyay wadahadalladii afarta jeer ay yeesheen Farmaajo iyo Madaxda Maamullada.
Gudiyadda doorashadda Heer Federaal iyo Heer Maamul Goboleed waxaa looga fadhiyaa Rooble inuu wax ka bedel ku sameeyo, oo ka saaro xubnaha Sirdoonka, Shaqaalaha rayidka iyo taageeriyaasha Farmaajo ee baraha bulshadda [Social Media], kuwaasoo Mushariixinta iyo Maamullada qaar kasoo horjeesteen.
Qodobka kale ee isna aadka la isku hayo waa arinta Gedo, oo dadka degan aad u diidan inuu Axmed Madoobe maamulo doorashadooda ka dhacaysa Garbahaarey, halkaasoo lagu soo dooranayo 16 kursi oo kamid noqon doono Baarlamaanka 11-aad.
Rooble ayaa laga sugayaa inuu magacaabo gudi dib u heshiisiineed oo ka shaqeeya arinta Gedo, iyadoo loo sameynayo Garbahaarey maamul ay bulshadda degaanka soo doorteen, laakiin lagu magacaabayo digreetadda Axmed Madoobe.
Booliska AMISOM ayaa la wareegi doono amniga doorashadda Garbahaarey marka lagu heshiiyo, waxaana dusha kala socon doono xafiiska Ra'iisul wasaaraha oo qaatey mas'uuliyadda iyo doorka dib u heshiisiinta Gedo.
Farmaajo ayaa Gedo geeyay Ciidan gaar ah oo u badan kuwa Beesha Mareexaan kasoo jeeda, oo Turkiga Muqdisho ku tababaray 2020, waxuuna meesha ka saarey maamulkii Axmed Madoobe oo ku bedelay mid Villa Somaliay taabacsan.
Arinta Somaliland qaa qodobka 3aad ee ugu adag heshiiska doorashadda, waxaana isku haya kuraasta gobollada waqooyi iyo hanaanka lagus oo dooranayo Cabdi Xaashi iyo RW ku xigeenka Mhadi Guuleed, oo dhanka Farmaajo ah.